မီးဇာတ်လမ်း | Logic on Fire! | Real Conversion
လော့စ်အိန်ဂျယ်လ်ရှိ Baptist Tabernacle အသင်းတော်တွင်၂၀၁၅ခုနှစ်
အောက်တိုဘာလ ( ၁၁ ) ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဟောကြားသော
Lord’s Day Morning, October 11, 2015
"ဤသူတို့သည် ကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခအထဲက ထွက် မြောက်၍၊ မိမိတို့ဝတ်လုံကို သိုးသူငယ်၏အသွေး၌လျှော်၍ ဖြူစေသောသူဖြစ်ကြသတည်း။"((ဗျာ ရး ၁၄ ) )
ဒေါက်တာ W. A. Criswell သည် Texas ပြည်နယ်၊ Dallas ရှိ ပထမနှစ်ခြင်းအသင်း တော်၏တရားဟောဆရာကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။ သူသည် ထိုနေရာတွင် နှစ်ပေါင်း ခြောက်ဆယ်နီးပါးတရားဟောတော်မူခဲ့သည်။ သူသည် အသက်ရှစ်ဆယ်သို့ရောက်လာသော အခါ တောင်ပိုင်းနှစ်ခြင်းအသင်းတော်အဖွဲ့အစည်း၏ ဤဆံပင်ဖြူသည့်ဘိုးဘေးဆရာတော် ကြီးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်အနောက်နိူင်ငံများ၏ကံကြမ္မာအကြောင်းကို ကြိုတင် နိမိတ်ဖတ်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ဒေါက်တာ Criswell က ဤသို့ဆိုသည်။
ကျွနု်ပ်တို့သည် ပုံမှန်သဘောတရားအားဖြင့် အလုပ်လုပ်နေကြပါ သည်။ အစိုးရနှင့်နိူင်ငံရေးသမားများသည် လူသတ်မှု၊ လိမ်လည် မှု၊ ကျိုးကြောင်းခိုင်လုံသောအရာကဲ့သို့သောခိုးမှုတို့ကို လစ်လျူရှုထား သည်။[ကျွနု်ပ်တို့၏ကောလိပ်တွင်ရှိသည့်] ပရော်ဖက်ဆာက လိင် ပိုင်းဆိုင်ရာတွင် လူတကာနှင့်ဆက်ဆံမှုကို တစ်ဦးချင်းစီ၏ ကိုယ် ပိုင်လွတ်လပ်မှုဟုဖော်ပြခြင်းဖြင့် မှန်ကန်သည်ဟုဆိုလျက်ရပ်တည် ပေးခဲ့သည်။ ရေတွက်မရနိူင်သည့်တရားပလ္လင်ပေါ်က အမှုတော် ဆောင်များသည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပါတ်တော်ပေါ်တွင် သင် ကြားရေးလွတ်လပ်မှုဟုဆိုကာ ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးကြသည်။ ကျွနု်ပ်တို့၏ [တောင်းပိုင်းနှစ်ခြင်းအသင်းတော်] တက္ကသိုလ်များ တွင်လည်း ထိုအတိုင်းပင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ကြမ်းတမ်းမှုများ၊ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှုများကို တေးသီချင်း၊ ပြဇာတ်၊ ရေဒီယို၊ နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များတွင် လက်ခံထည့်သွင်းကြပါသည်။ ဤမျိုးဆက်များနှင့်ရောက်မလာသေးသောမျိုးဆက်များသည် ရုပ် လောကအရာပျော်ရွှင်မှုသာ ပဓါနထားပြီးရှာဖွေနေကြသည်။ အ နေက်တိုင်းကမ္ဘာတစ်ခုလုံးသည် တစ်နေ့လျှင် လူပေါင်း ၁၂၅၀၀၀ နှုန်းဖြင့် ဘုရားမဲ့တရားမဲ့ဖြစ်နေကြပါသည်။ (W.A. Criswell, Ph.D. ဓမ္မပညာအယူဝါဒ၊ အတွဲ ၈၊ Zondervan Publishing House, ၁၉၈၉၊ စာ- ၁၄၈၊ ၁၄၇ )
ဒေါက်တာ Criswell က တောင်းပိုင်းနှစ်ခြင်းအသင်းတော်သည် သေလျက်ရှိနေပြီးပြီ ဟု ထို၀မ်းနည်းဖွယ်သတင်းပေးပို့မှုကိုလုပ်ဆောင်ကတည်းက သူတို့၏အသင်းသားအရေအ တွက်သည် နှစ်တိုင်းကျဆင်းလာသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်တစ်နှစ်တည်းမှာပင် တောင်ပိုင်းနှစ်ခြင်း အသင်းသား ၂၀၀၀၀၀ သည် အသင်းတော်ကိုစွန့်ခွါပြီး ပြန်မလာကြတော့ပါ။ နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်း တောင်ပိုင်းနှစ်ခြင်းအသင်းတော်ဘုရားကျောင်း ၁၀၀၀ ကျော်သည် ဤတိုင်းပြည်တွင် လုံးဝပြန် မဖွင့်ဘဲ ပိတ်ထားကြသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်က သာသနာပြု ၈၀၀ ကျော်ကို ပြန်ခေါ်ခဲ့ကြသည်။ သာသနာအတွက်အလှူငွေများသည် ကျဆင်းလာသဖြင့် သူတို့ကို မထောက်ပံ့နိူင်ကြတော့ပါ။ ကျွနု်ပ်တို့၏ကိုယ်ထူကိုယ်ထနှစ်ခြင်းအသင်းတော်များသည်လည်း ကောင်းစွာမလုပ်ဆောင်နိူင် ကြတော့ပါ။ အေဂျီသင်းအုပ်ဆရာက သူတို့၏အသင်းတော်သည် ထိုသို့လုပ်ဆောင်နေသည်ဟု ဆိုပါသည်။ သူတို့အသင်းတော်သည် အခြားအသင်းတော်များထက်လည်း ပို၍ဆိုးကြသည်။ ထိုအကြောင်းကိုရေးသားသည့် စာအုပ်နှစ်အုပ် လက်ထဲတွင်ရှိသည်။ တစ်ခုမှာ ဧဝံဂေလိလုပ် ငန်းကျဆင်းမှုကြီး၊ အမေရိကန်အသင်းတော်ကိုထိုးကျဆင်းစေသည့်အချက် ၆ ချက်၊ (John S. Dickerson, Baker စာအုပ်များ၊ ၂၀၁၃ ) ဒုတိယစာအုပ်မှာ ကျရောက်လာမည့်ဧဝံဂေလိ အကြပ်အတည်းဖြစ်ပါသည်။ (John H. Armstrong, အယ်ဒီတာချုပ်၊ Moody ပုံနှိပ်တိုက်၊ ၁၉၉၆ ) ကျွန်တော်ဖတ်သမျှစာအုပ်၊ တွေ့သမျှဆောင်ပါးများက ကျွနု်ပ်တို့၏ဧဝံဂေလိလုပ်ငန်း သည် အတိဒုက္ခနှင့်ကြုံတွေ့နေရကြောင်း စသည့်အချက်ကို ညွှန်ပြသည်။ အသင်းတော်တွင် ကြီးပြင်းလာသောလူငယ်များသည် အသင်းတော်ကိုစွန့်သွားကြသည်။ အသင်းတော်သည် လူ ငယ်များအား လောကထဲက မထုတ်ဆောင်နိူင်ပါ။ John Dickerson က "တပည့်တော်သစ် မွေးမြူရန်ပျက်ကွက်ကြသည်၊ ကျွနု်ပ်တို့၏တည်ရှိနေသောတပည့်တော်များသည် ၄င်းတို့၏အ သက်ရှင်ခြင်း သို့မဟုတ် အတွေးအခေါ်တွင် အသီးသီးပြီး ပြောင်းလဲခြင်းမရှိကြပါ" ဟုဆုုိသည်။ (၄င်း၊ စာ- ၁၀၇၊ ၁၀၈ ) သို့သော် သူသည် ပြဿနာကိုဖြေရှင်းမည့်မှန်ကန်သောနည်းလမ်းများ ကို အကြံပေးရန် သွားခဲ့သည်။ သူတို့အားလုံးကို ကျွနု်ပ်ကြိုးစားအားထုတ်ပါသည်။ သို့သော် အလုပ်မဖြစ်ဘူးဆိုသည်ကိုသိသည်။ အဘယ့်ကြောင့်နည်း။ သူတို့သည် ပြဿနာ၏အရင်းအ မြစ်ဆီသို့မသွားကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဥပမာတစ်ခုကိုပေးပါ။ ကျွနု်ပ်သည် ဆယ်ကျော်သက်တစ်ယောက်အနေဖြင့် ရင့်မှည့် သောအသီး၊ ခူးချွေရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သောအသီးဖြစ်သည်။ ကျွနု်ပ်သည် အသင်းတော်တွင်ရှိ လိုသည်။ ကျွနု်ပ်သည် ကျိုးပဲ့သည့်အိမ်က လာသည်။ မိဘတွေနှင့်အသက်မရှင်ပါ။ ကျွနု်ပ် သည် အသင်းတော်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ Huntington Park ရှိ အသင်းတော်ဖြူက ကျွနု်ပ်ကို လက်မခံပါ။ အဘယ့်ကြောင့်နည်း။ အ ကြောင်းပြချက်များစွာရှိပါသည်။ အသင်းတော်အစီအစဉ်များကို ပျောက်ဆုံးသောဆယ်ကျော် သက်များအတွက်မဟုတ်ဘဲ ဇာတိသဘောဖြင့်အသက်ရှင်သည့်အလယ်အလတ်အရွယ်အမျိုး သမီးများကို စိတ်ကျေနပ်စေရန်သာဖြစ်သည်။ အသင်းတော်တွင်ရှိသောလူများသည် ငါ့ကို စိတ်ပင်မဝင်စားကြပါ။ သင်းအုပ်ကလည်း ငါ့ကိုစိတ်မဝင်စားပါ။ နောက်ဆုံးတွင် ကျွနု်ပ်သည် ဆုံးသွင်းသည့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ငွေကြေးမလုံးလောက်သည့် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မျှ သာဖြစ်ပါသည်။ ထိုနေရာတွင်လည်း တရားဒေသနာဟောပြောခြင်းရှိပါသည်။ ကျွနု်ပ်သည် ထို နေရာတွင်ရှိစဉ်ခါ သင်းအုပ်သုံးယောက်ရှိကြသည်။ သူတို့ကိုကြိုးစားနားထောင်လိုက်သော် လည်း ကျွနု်ပ်ဘဝအတွက်မူ ၄င်းတို့၏တရားဒေသနာတွင်ပြောဆိုကြသည့်အရာကိုတော့ အ ဘယ်အရာကိုမျှ သတိမရပေ။ ပထမနှစ်ချက်တွင် အဘယ်အရာကိုမျှမထူးဆန်းပေ။ နောက်ဆုံး တစ်ခုသည်လည်း အရေးမကြီးပါ။ ၄င်းတို့၏တရားဒေသနာများသည် ကျွနု်ပ်ကိုမတို့ထိပါ။ ကျွနု်ပ်အသက်တာတွင် အကျိုးမပေးပါ။ ကျွနု်ပ်ကိုစိန်ခေါ်ထားချက်မှုမရှိပါ။ ကျွနု်ပ်အပြစ်ကို လည်း သိမြင်စေခြင်းမရှိပါ ။
ထိုနေရာသည် တရားဒေသနာတွင် ကျွနု်ပ်တို့၏ပြဿနာများ၏အမြစ်တည်နေရာဖြစ်ပါ သည်။ ကျွနု်ပ်တို့၏တရားဒေသနာပြောင်းလဲမသွားသ၍ ကျွနု်ပ်တို့အသင်းတော်အတွက် မျှော် လင့်ချက်မရှိနိူင်ပါ။ ဘင်နာထရုတ် မဂ္ဂဇင်း ၂၀၁၄ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် John J. Murray ရေး သားသည်ကို ဖတ်ရှုရသည်။ သူက "ကျွနု်ပ်တို့လွတ်မြောက်ရန်လိုအပ်သည့်အခြေအနေမှ" အ ချက်အလက်ခုနှစ်ခုကို ထုတ်ဖော်ထားပါသည်။ သူပေးထားသည့်အချက်များအားလုံးကို သ ဘောတူလက်ခံသော်လည်း အမိန့်အားဖြင့်ပေးထားသည်ကိုတော့ သဘောမကျပေ။ သူက ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သောခုနှစ်ခုအဖြစ် "တန်ခိုးပါသောတရားဒေသနာ" ကိုပေးထားပါသည်။ ကျွနု်ပ်သဘောမတူပေ။ ဒါပထမအချက်ဖြစ်မည်ဟုထင်မိသည်။ သူက ကျွနု်ပ်တို့သည် "တန်ခိုးပါသောတရားဒေသနာမရှိခြင်း" မှ ဝေငှရန်လိုအပ်သည်ဟု ဆိုသည်။ သူက "တရား ဟောခြင်းသည် ယနေ့ခေတ်တွင် မခေတ်စားတော့ပါ" ဟုဆိုသည်။ အဘယ့်ကြောင့် ထိုသို့မ ဖြစ်သနည်း။ စိတ်ပျက်စရာသာဖြစ်ပါသည်။ ရိုးစင်းလွန်းပါသည်။ သူက "ဘုရားသခင်၏နှုတ်က ပါတ်တော်ကြားနာခြင်းခေါင်းပါးလျက်ရှိသည်" ဟုဆိုသည်။ ကြားနာခြင်းသည် အဘယ့်ကြောင့် ခေါင်းပါးတော်မူသနည်း။ အကြောင်းမှာ တရားဒေသနာသည် ညည်းငွေ့ဖွယ်ရာကောင်းပါ သည်။ အရမ်းရိုးစင်းလွန်းပါသည်။ ယနေ့တရားဒေသနာသည် အဘယ့်ကြောင့် ညည်းငွေ့ဖွယ် ကောင်းပါသနည်း။ အကြောင်းတရားများစွာရှိပါသည်။
ပထမအချက်မှာ တရားဟောဆရာများစွာတို့သည် "တရားဒေသနာဟောရန်ခေါ်ထား ခြင်း" မခံကြရပေ။ "တရားဟောရန်အဘယ်သူကိုမျှ" မခေါ်ပါဟု မဆိုလိုပါ။ ထို့ပြင် တရား ဟောဆရာများစွာတို့သည် မပြောင်းလဲကြပါ။ ပြောင်းလဲသောသူများသည်လည်း တရားဟော ရန်အမြဲခေါ်လေ့မရှိပါ။ သူတို့တွင် ၀န်တာမရှိ၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိ၊ ဘိသိတ်ခြင်းမရှိ၊ ပျောက်ဆုံး သူများကို သနားတတ်သည့်စိတ်မရှိပေ။ အများစုက သင်ကြားခြင်းနှင့်တရားဟောခြင်းတို့၏ ခြားနားချက်ကို နားမလည်ကြပါ။ ဒေါက်တာ Timothy Lin သည် နှစ်ပေါင်းများစွာ သင်းအုပ် အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ သင်တန်းကျောင်းဆရာက ဤမှတ်ချက်ကိုပေးထားသည်။ "သင်ကြား ခြင်းနှင့်တရားဟောခြင်းသည် လုံးဝတူညီသည်" ဟုမှတ်ချက်ပေးထားသည်။ ဒေါက်တာ Lin က "သင်တန်းကျောင်းဆရာတစ်ဦးအနေဖြင့်၊ သင်ကြားခြင်းနှင့်ဟောပြောခြင်း၏ခြားနားချက် ကိုပင် မပြောနိူင်ပေ။ သူ၏တပည့်များက တရားဟောနိူင်ပါမည်လော။ အဖြေကတော့ရှင်းပါ သည်။ 'ဟောနိူင်ကြမည်မဟုတ်ပါ။'" (အသင်းတော်ကြီးထွားခြင်း၏လျှို့ဝှက်ချက်၊ စာ- ၂၀ ) )
John MacArthur ၏ပြောဆိုချက်ကို နားထောင်ကြပါစို့။ သူသည် တရားဟောနေပါ သလား။ John Piper ကို နားထောင်ကြပါ။ သူသည် တရားဟောနေပါသလား။ David Jeremiah သို့မဟုတ် Paul Chappell သို့မဟုတ် Bill Hybels သို့မဟုတ် Rick Warren သို့မ ဟုတ် Charles Stanley တို့ကို နားထောင်ပါ။ သူတို့သည် တရားဟောနေကြပါသလား။ အဘယ်သို့သောတရားဒေသနာဖြစ်သည်ကို သြိကသလား။ အချို့က လူကောင်းများဖြစ်ကြ သည်။ ဟုတ်ပါသည်။ သူတို့က ကောင်းကြပါသည်။ သို့သော် သူတို့က စစ်မှန်သောတရားဒေ သနာသည် အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကို သိကြမည်ဟု ကျွနု်ပ်မထင်ပါ။ ဒေါက်တာ Martyn Lloyd-Jones က "တရားဟောခြင်းဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ မီးဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါသည်။ တရားဟောခြင်းသည် မီးတွင်ရှိနေသောလူအားဖြင့် ဓမ္မပညာရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်" ဟုဆိုပါသည်။ (တရားဟောခြင်းနှင့် တရားဟောဆရာများ ၊ စာ- ၉၇ ) ကျွနု်ပ်ဖော်ပြထားသော သူများသည် မီးပေါ်တွင်ရှိနေကြသလား။ သူတို့သည် မီးပေါ်တွင်ရှိသော တရားဟောသူများ၏ တရားဟောချက်ကို ကြားဖူးြကပါသလား။ ထိုကဲ့သို့ရေဒီယိုတွင်ရှိသောသူသည် နှစ်ပေါင်းသုံး ဆယ်လောက်သေသောသူဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် Oliver B. Greene ကဲ့သို့ အဘယ် သူတရားဟောပါသနည်း။ ဟုတ်ပါတယ်။ "တရားဟောခြင်းဟူသည်မှာ မာတင်လူသာ၊ ၀ှုိက်ဖီးလ်၊ ဟို၀ဲဟာရီးဆ်၊ ဒံယေလရိုလင်း၊ ဒဗလျူ၊ ဖီ၊ နိတ်ဂိုဆန်၊ ဒေါက်တာ ဂျွန်ဆန်၊ စပါဂျွန်၊ မက်ချီနီ၊ ဂျွန်ဆယ်နက်၊ သို့မဟုတ် ဂျွန်နော့စ် ကဲ့သို့သော မီးပေါ်တွင်ရှိသောလူများအားဖြင့် ရောက်ရှိလာသည့် ဓမ္မပညာသာဖြစ်ပါသည်။"
ဘင်နာထွက်စ်မဂ္ဂဇင်းတွင်လည်း ထိုနည်းတူစွာပင် ဂျွန်နုတ်စ်နှင့်ပါတ်သက်ပြီး ဆောင်း ပါးကိုရေးသားထားပါသည်။ (စာ- ၂၉၊ ၃၀ ) ဆောင်ပါးက နုတ်စ်သည် "တန်ခိုးဖြင့်" ဟောပြော သည်ဟုဆိုသည်။ "တရားဒေသနာကို ကောင်းကင်ဘုံကတန်ခိုးအားဖြင့်ဟောကြားသည်။" ဆောင်းပါးက "အသင်းတော်သည် ဤနေ့ရက်များတွင် အခြားသတင်းအချက်အလက်များကို မြင်တွေ့ရန်ဆိုလျှင် နုတ်စ်ကဲ့သို့သောတရားဟောဆရာကြီးများလိုအပ်ပါသည်။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် လူသိများ[သည်ဖြစ်စေ၊ မများသည်ဖြစ်စေ] ဟောင်းနွမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ထစ် ထစ်ငေါ့ငေါပြောဆိုခြင်းမရှိဘဲ ပြည့်ဝစုံလင်သောရှေ့တော်ပြေးလုပ်ဆောင်ရပါမည်" ဟုဆို ကာအဆုံးသတ်ထားသည်။ Spurgeon က "ဂျွန်နုတ်စ်၏ဧဝံဂေလိတရားသည် ကျွနု်ပ်၏ဧဝံ ဂေလိတရားဖြစ်တယ်၊ စကော့တလန်တွင်စီးသောလျှပ်စီးသည် အင်္ဂလန်တွင်လည်း စီးရမည်" ဟုဆိုသည်။ (ကိုယ် တိုင်ရေးအတ္ထုပ္မတ္တိ၊ အတွဲ ၁၊ စာ- ၁၆၂ )
ဤသူတို့သည် စလုံးနုနုနှင့်ခေါင်သောအတို့အထိများဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့အား အိပ်ပျော်စေ သည့် သူများနှင့်ခြားနားပါသည်။ သူတို့သည် ကျွနု်ပ်တို့အား အသီးသီးစေသည်။ သူတို့သည် ကျွနု်ပ်တို့အား သေခြင်းထံသက်သေခံစေသည်။ ကျွနု်ပ်တို့၏လူများက သူတို့ကို နားထောင်ရန် မုန်းတီးကြသည်မှာ မထူးဆန်းပေ။ "တရားဟောခြင်းသည် မီးပေါ်တွင်ရှိသောလူအားဖြင့် လာသောဓမ္မပညာဖြစ်ပါသည်။" သူတို့သည် မည်သူ့ကိုကြောက်ကြသနည်း။ ယခုစဉ်းစားပါ။ တစ်ဦးဦးကို ကြောက်နေကြပေမည်။ အဘယ်အရာဖြစ်သနည်း။ ဤတရားဟောဆရာများ ကြောက်ရွံ့ကြသည့်ခေတ်သစ်တရားဟောဆရာများကို သင့်အားပြောပြမည်။ သူတို့သည် ၄င်းတို့၏အသင်းတော်များကိုရှာတွေ့ကြသည့် ဇာတိသဘောဖြင့်အသက်ရှင်ကြသည့် လူလွတ် ပိုင်းအမျိုးသမီးများဖြစ်ကြပါသည်။ သူတို့သည် မည်သို့တွေ့ရှိကြသနည်း။ "သင်သည် ထိုသို တရားဒေသနာဟောပြောလျှင် ကျွနု်ပ်တို့ပြန်လာမည်မဟုတ်။" "အဘယ်သို့လုပ်ဆောင်သည် ကိုသိပါသည်။" သူတို့သည် မောပန်းနွမ်းနယ်ကြသည်။ ကျွနု်ပ်သည် သူတို့ကို တာရှည်ခံစေ သည့်တိုင်အောင် ဟောနေကျအတိုင်း ဆက်လက်တရားဟောပါသည်။ ဂျွန်နော့စ်သည် သွေး စွန်းသောမာရိကို ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိပါ။ ကျွနု်ပ်တို့သည်လည်း ဇာတိသဘောဖြင့်အသက်ရှင်ကြ သည့်အမျိုးသမီး သို့မဟုတ် ဆန်းဒေးစကူးလ်အုပ်ချုပ်သူ ဇာတိသဘောဖြင့်အသက်ရှင်သည့် အမျိုးသမီးကို ကြောက်ရွံ့နေစရာမလိုပါ။ ကျွနု်ပ်က သူတို့ထံ တရားဟောဖို့လိုအပ်သည်ဟုထင် ပါသည်။ ထို့နောက် လူငယ်များသည် ဘုရားကျောင်းသို့လာကြမည်။ ထိုအရာသည် ညည်းငွေ့ စရာမဟုတ်ပါ။ ထိုအရာသည် လူငယ်တို့၏အရုံစူးစိုက်မှုကို ရရှိလာမည်။ ထို့နောက် အဆုံးတွင် ဤနံနက်တွင် ကျွနု်ပ်တို့ရရှိထားသကဲ့သို့ ဘုရားသခင်အတွက် မီးပေါ်တွင်ရှိကြသည့် လူငယ် အဖွဲ့ကို ကျွနု်ပ်တို့ရရှိမည်။ ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုရပ်တန်းကရပ်ပြီး ဂျွန်နော့စ်ကဲ့သို့ တရားဟောပါ။
တရားဒေသနာဟောကြားခြင်းသည် သတင်းပေးခြင်းသက်သက်မဟုတ်ပါ။ ယနေ့ ခေတ်ကာတွင် "ရှင်းပြတရားဒေသနာ" ဟုကင်းပွန်းတပ်ထားသောအရာနှင့်လည်း ကွဲပြားခြား နားပါသည်။ ဒေါက်တာ Lloyd-Jones က ကျမ်းပိုဒ်တစ်ပိုဒ် သို့မဟုတ် နှစ်ပိုဒ်ဖြင့် သန့်ရှင်းသူများကဲ့သို့ ဟောပြောပါ သည်။ သူက "တရားဟောဆရာသည် လူတို့အား ဗဟုသု တ နှင့် သတင်းအချက်အလက်ကိုပေးဖို့ တရားပလ္လင်မှာ ရှိရုံသက်သက်ရှိသောသူမဟုတ်ပါ။ သူတို့ကို ပြင်ဆင်ဖို့၊ စိတ်အားထက်သန်စေဖို့၊ အသက်ရှင်စေပြီး သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ဖြင့် ဘုန်းထင်ရှားစေရန်ဖြစ်သည်" ဟုဆိုပါသည်။ (သန့်ရှင်းသူများ၊ စာ- ၃၁၆ )
"တရားဟောခြင်း" က "ဆရာဝန်" ကို "လူတို့အား တစုံတရာလုပ်ဆောင်ပေးရန်သတ် မှတ်ထားသည်"ဟုဆိုသည်။ (Lloyd-Jones, တရားဟောခြင်းနှင့်တရားဟောဆရာများ၊ စာ-၈၅ ) တရားဟောခြင်းသည် လူတို့အား အဘယ်အရာကိုလူဆောင်သင့်သနည်း။ ပထမတွင် သူတို့ အား ကြောက်ရွံ့ခြင်း သို့မဟုတ် အမျက်ထွက်ခြင်း တစ်ခုခုကိုဖြစ်စေရပါမည်။ သူတို့သည် ခက် ထန်သော၊ ပုန်ကန်သောစိတ်နှလုံးသားရှိကြသည်ဟုဆိုသောကြောင့် စိတ်ဆိုးအမျက်ထွက်ကြ မည်။ သူတို့သည် ထင်ထားသကဲ့သို့ တည်ငြိမ်သော၊ ခန့်ညားခြင်းမရှိကြောင်းပြောကြားခြင်း ကြောင့် အမျက်ဒေါသထွက်ရမည်။ သူတို့သည် တည်ငြိမ်မှုရှိကြသောကြောင့် မယုံကြည်သူ များဖြစ်ကြပါသလား။ သူတို့ထဲက အဘယ်သူမျှ ဒေါက်တာ Chan လောက်မတည်ငြိမ်ကြပါ။ ဒေါက်တာ Cagan လောက်လည်း မတည်ငြိမ်ကြပါ။ ကျွနု်ပ်၏နည်းလမ်းအားဖြင့်ပြောရလျှင် ကျွနု်ပ်လောက်လည်း မတည်ငြိမ်ကြပါ။ ထို့ကြောင့်သာလျှင် သူတို့ကို ကျွနု်ပ်မကြောက်ပါ။ Ron Reagan သည် လွန်ခဲ့သောအပတ်က တီဗွီတွင်လာပြီး "ကျွနု်ပ်"သည် Ron Reagan ဖြစ်ပါ သည်။ အသက်ရှည်ကြာနေသည့် ဘုရားမဲ့ဝါဒီလည်းဖြစ်ပါသည် ဟုဆိုပါသည်။ ကျွနု်ပ်သည် ငရဲတွင် လောင်ကျွမ်းနေမည်ကိုမကြောက်ရွံ့ပါသည်။ သူသည် ၄င်း၏ခမည်းတော် Reagan ထက် ပို၍တည်ငြိမ်အေးဆေးသည်ဟုထင်သည့် ပါးလျသော၊ ဖျားနာသော ဘဲကလေးအကသ မားအမှန်တကယ်ဖြစ်သလော။ သူသည် ၄င်း၏ခမည်းတော်ကို ဖယောင်းတိုင်တောင်ကိုင်မပေး ပါ။ သူသည် လက်ညှိုးဖြင့် သေနေသော သူ့အဖေ၏မျက်စိကိုထိုးသည်။ သို့သော် သူသည် ခမည်းတော်ကဲ့သို့ စာရေးဆရာ၊ အများပြည်သူရှေ့တွင်မတ်တပ်ရပ်စကားပြောသူ၊ လွတ်လပ် ကမ္ဘာ၏ခေါင်း ဆောင်၊ ၂၀ရာစုဒုတိယနှစ်ဝတ်၏အကြီးကျယ်ဆုံးသမ္မတတော့ဖြစ်မည်မဟုတ် ပါ။ သူသည် ဆန်းကြယ်သောအကသမားအဖြစ်သို့ မရောက်ရှိနိူင်ပါ။ (သူဖြစ်နေသောအရာပင် ဖြစ်သည်။ ) သူသည် သေဆုံးသွားသောခမည်းတော်၏နာမည်ဖြင့် ငွေကြေးကိုသာလုပ်ဆောင် နိူင်သည့် ဘလေးအကပညာသည်သာဖြစ်သည်။ သူတို့သည် တည်ငြိမ်အေးဆေးသောကြောင့် မယုံကြည်သူများဖြစ်သည်မှာ လုံးဝမဟုတ်ပါ။ သူတို့သည် မယုံကြည်သည့်ဆိုးသွင်းသည့်နှလုံး သားရှိကြသည်ဟူသောအချက်ကို မတွေ့မြင်ကြသောကြောင့် မယုံကြည်သူများဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကို ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်ကြသောကြောင့် မယုံကြည်သူများဖြစ် ကြသည်။ "ထိုသူမပြောပါနှင့်။ သင်သည် သူတို့ကို ကြောက်လန့်စေလိမ့်မည်။" ကောင်းပါပြီ။ တစ်ဦးကိုကြောက်လန့်စေနိူင်သည်။ သို့သော် ၄င်းက နှစ်ယောက်ကို ကြောက်ရွံ့စေနိူင်သည်။ ထို့ကြောင့် တစ်ဦးကြိုတင်ထွက်လာမည်။ အဘယ်သူမျှကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့မရောက်သကဲ့ သို့သာ ကျွနု်ပ်တရားဟောမည်ဆိုလျှင် ကျွနု်ပ်၏တရားဒေသနာတွင် သင်တို့အား သင်တို့စိတ် နှလုံးညစ်ပတ်သည်၊ မသန့်ရှင်းဘူး၊ ပုန်ကန်မှုရှိသည် စသည်ဖြင့်ပြောမည်။ ဟုတ်ပါတယ်။ သင် ၏အပြစ်ကြောင့်ငရဲသို့သွားမည်ဟု ယေရှုခရစ်ပြောတော်မူသည်အကြောင်းကို သင်တို့အား ပြောပေမည်။ Ron Reagan သည် ငရဲကိုကြောက်သောသူမဟုတ်ပါ။ အကြောင်းမှာ သခင်ယေရှု၊ အမေရိကန်သမ္မတဖြစ်ခဲ့သော သူ၏အဖေတို့ထက် တည်ငြိမ်အေးဆေးသည်ဟု ထင်မှတ်သည့် ထိုသို့မိုက်မဲသောသူဖြစ်ပါသည်။ သူကဲ့သို့မိုက်မဲသောသူကို သင်ကူညီနိူင်မည် မဟုတ်။ "ဘုရားသခင်မရှိဟု မိုက်သောသူသည် ထင်တတ်၏။" (ဆာလံ ၁၄း ၁ ) သူသည် ဘလေးအကပညာသည်ဖြစ်ရန် အသက်ကြီးလွန်းသည်။ သူသည် ၄င်း၏ခမည်းတော်၏ယုံ ကြည်ခြင်းကို လှောင်ပြောသရော်ပြီး ငွေသာရတတ်သည်။ သူသည် ပြောင်ချော်ချော်လူဖြစ် သည်။ သူသည် အသက်ကြီးသူအမျိုးသမီးကြီးကဲ့သို့ အစပြုသည်။ သူသည် ဇာတိပကတိအ တိုင်းအသက်ရှင်သည့် အလကားလူသာဖြစ်သည်။
သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ကိုးစားရန် ငြင်းဆန်ကန့်ကွက်သူများအား စောင့်ဆိုင်း နေသည့် ပြင်းထန်သောငရဲရှိပါသည်။ သခင်ယေရှုခရစ်က ဤသို့ဆိုပါသည်။
"ထိုသူ၏ခြေကိုတုတ်နှောင်လော့။ ငိုကြွေးခြင်း အံသွားခဲကြိတ်ခြင်း ရှိရာ၊ ပြင်အရပ်မှောင်မိုက်ထဲသို့ယူသွား၍ချလိုက်ကြဟု အမိန့် တော်ရှိ၏။ ထိုသို့ခေါ်တော်မူသောသူအများရှိသော်လည်း၊ ရွေး ကောက်တော်မူသောသူနည်းသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။"(မဿဲ ၂၂း ၁၃၊ ၁၄ ) )
ဟုတ်ပါသည်။ သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ကိုးစားရန် ငြင်းဆန် ကန့်ကွက်သူများအား စောင့် ဆိုင်းနေသည့် ပြင်းထန်သောငရဲရှိပါသည်။
သို့သော် "[ဘုရားသခင်သည်] အဘယ်သူကိုမျှ မပျက်စီးစေလိုပါ။" (၂ပေ ၃း ၉ ) သို့ အတွက်ကြောင့် အပြစ်သားများနေရာတွင်၊ ကိုးစားထိုးပြီး ကျွနု်ပ်တို့အပြစ်၏အခကိုပေးဆပ်ရန် လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အသေခံမည်အကြောင်း တပါးတည်းသောသားတော်ကို စေလွှတ်တော် မူခဲ့ပါသည်။
ထိုအကြောင်းအရာက ကျွနု်ပ်တို့အား ကျွနု်ပ်တို့၏အခြေပြုကျမ်းပိုဒ်ဆီသို့ပြန်လည် ခေါ်ဆောင်လာပါသည်။ တမန်တော်ရှင်ယောဟန်အား ပရဒိသုဘုံ၏ရူပါရုံကို ပြသခဲ့သည်။ ထို အရပ်တွင် "အသီးအသီးဘာသာစကားကိုပြောသော လူအမျိုးအနွယ်ခပ်သိမ်းတို့အထဲမှ ထွက် ၍၊ အဘယ်သူမျှမရေတွက်နိူင်သော လူများအပေါင်းတို့သည် ဖြူသောဝတ်လုံကို၀တ်ဆင်လျက် စွန်ပလွံခက်ကိုကိုင်လျက်၊ ပလ္လင်တော်ရှေ့၊ သိုးသူငယ်ရှေ့မှာရပ်နေကြ၏……ဤသူတို့သည် ကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခအထဲက ထွက်မြောက်၍၊ မိမိတို့ဝတ်လုံကို သိုးသူငယ်၏အသွေး၌ လျှော်၍ ဖြူစေသောသူများဖြစ်ကြသည်" ကို မြင်တော်မူခဲ့သည်။ (ဗျာဒိတ် ရး ၉၊ ၁၄ ) ထို ကောင်းကင်ဘုံတွင်ရှိသောသူတို့အား ခရစ်တော်၏အသွေးတော်ဖြင့်ဆေးကြောမည်။ အ ကြောင်းမှာ သားတော်ယေရှုခရစ်၏အသွေးတော်သည် အပြစ်ရှိသမျှကိုဆေးကြောတော်မူ သည်။ ( ၁ယော ၁း ရ ) ဒေါက်တာ Andrew Murray (၁၈၂၈- ၁၉၁၇ ) ဤသို့ဆိုသည်။
ကျွနု်ပ်တို့သည် သေခြင်းတရားကို စိတ်ချမှုအပြည့်ဖြင့် ရင်ဆိုင်နိူင် ပါသည်။ ကျွနု်ပ်သည် ကောင်းကင်သို့သွားရန်အခွင့်အရေးရှိပါ သည်။ ဘုရားသခင်၏ပလ္လင်ရှေ့တော်မှောက်တွင် နေရာတစ်ခုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသောသူများကား အဘယ်သူတို့နည်း။ "သူတို့သည် ၄င်းတို့၏အဝတ်များကို သိုးသူငယ်၏အသွေးဖြင့် ဆေးကြောသန့် စင်ကြပြီလား။" သင်သည် အသွေးတော်အားဖြင့် ဆေးကြောခြင်း ကိုမခံရသေးလျှင် ကောင်းကင်မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် မိမိကိုယ်ကို မ လှည့်ဖြားပါနှင့်။ ယေရှုကိုယ်တိုင်က အသွေးတော်အားဖြင့် ဆေး ကြောသန့်စင်တော်မူသည်ကိုသိရှိထားခြင်းမရှိဘဲ သေခြင်းကို ရင် မဆိုင်ရဲပါနှင့်။ (Andrew Murray, D. D., ယေရှုခရစ်၏အသွေး တော်တန်ခိုး၊ CLC Publications, ၂၀၁၃၊ စာ- ၂၂၁ )
ယနေ့နံနက် ယေရှုကို ယုံကြည်ကိုးစားရန် ခေါ်ဖိတ်ပါ၏။ သင်ကိုးစားသည်နှင့် အသွေးတော် အားဖြင့် အပြစ်ဆေးကြောခြင်းကို ခံစားရမည်။ ၄င်းမှာ သင်သည် စစ်မှန်သောလူဖြစ်လာသော အချိန်တွင် ဖြစ်သည်။ ၄င်းမှာ ကားတိုင်တော်၏စစ်သားဖြစ်လာသည့်အချိန်တွင်ဖြစ်သည်။
မကြာသေးခင်က အသင်းတော်ရှိပြောင်းလဲသောသူများ၏စကားကို နားထောင်ပါ။ သူ တို့မှာ ယနေ့နံနက်တွင် ဤနေရာတွင်ရှိနေကြသည့် စစ်မှန်သောလူငယ်များဖြစ်ကြသည်။ လူငယ်မိန်းကလေးက သက်သေခံချက်ပေးထားပါသည်။
"ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်ကိုးစားမည်လော့။" ဒေါက်တာ Hymers က ကျွနု်ပ်ကိုမေးသည်။ "ဒူးထောက်ပြီး သူ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားပါ တဲ့။" ကျွနု်ပ်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ကျွနု်ပ်ကိုးစားခဲ့သည်။ မိမိကိုယ် ကို ခရစ်တော်ပေါ်တင်လိုက်သည်။ ယေရှု ကျွနု်ပ်ကိုချစ်သည်။ ယေရှုကျွနု်ပ်ကိုချစ်သည်။ မေးခွန်းမေးစရာမရှိပါ။ သေချာမှုကို နောက်ထပ်ခံစားစရာလည်း မလိုအပ်တော့ပါ။ ယေရှု ကျွနု်ပ်ကို ချစ်သည်။ သူသည် ကျွနု်ပ်အတွက်၊ အပြစ်၏အခကိုပေးဆပ်ရန် လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အသွေးသွန်းလောင်းပြီး အသေခံတော်မူခဲ့ သည်။ အံ့ဘွယ်မေတ္တာပါတကား။ တပါးတည်းသောသားတော်ထံ ပါးသို့တိုးဝင်ချဉ်းကပ်စေတော်မူသောဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင် ပါသည်။ သူသည် ကျွနု်ပ်အား ဦးစွာချစ်သောကြောင့် ယေရှုကို ချစ်သည်။
ကောလိပ်ကောင်းသားတစ်ဦးထံ အခြားစာတစ်စောင်လည်း ကျန်ပါသေးတယ်။
ဒီမနက် ကျွနု်ပ်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်၊ ဒေါက်တာ Hymers က ခရစ်တော်မရှိသောသူများကို စာတန်ကအဘယ်သို့မျက်စိကန်းစေ သည်အကြောင်းကို ဟောပြောခဲ့သည်။ သူပြောလိုက်သည့်နည်း လမ်းတစ်ခုမှာ ပျောက်ဆုံးသောသူ၏စိတ်နှလုံးသားထဲတွင် အ လုပ်လုပ်ဆောင်ပြီး သူသည် အကြံဉာဏ်ပေးသောသူအား တစ်စုံ တစ်ခုကိုပြောမည်အကြောင့် စိတ်ချမှုရှိသည်ဟုခံစားချက်ရှိသည် ဟု ထင်မြင်စေသည်။ ကျွနု်ပ်က ၄င်းသည် "ငါပင်ဖြစ်သည်" ဟု ထင်မိသည်။ "ကျွနု်ပ်၏အဖြစ်အပျက်နှင့်တစ်ပုံစံထဲသို့ ရောက်နေ သည်။" ကျွနု်ပ်သည် ပတ်ချာလည်နေပြီး ခရစ်တော်ကို လုံးဝမ ကြည့်ခဲ့ပါ။ ကျွနု်ပ်အားစောင့်နေသည့် အသက်ရှိသည်။ သို့သော် မိမိကိုယ်ကိုမြှင့်တင်ရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ ဒီအရာကို အဘယ်သို့ ပစ် ပစ်ခါခါငြင်းနိူင်သနည်း။ ကျွနု်ပ်သည် အပြစ်ကိုဆုတ်ကိုင်ပြီး ယေရှု ကိုမကြည့်ဘဲ နေနိူင်ပါသလား။ ကျွနု်ပ်၏စိတ်ဝိညာဉ်ကို ချစ်သော သူအားဖြစ်သည်။ အို၊ ကျွနု်ပ်အတွက် အပြစ်တုန်းကြီးကို ဆောင် ယူရန် အဘယ်မျှလောက်ကျွနု်ပ်လိုအပ်သည်ကို သိသည်။ ကျွနု်ပ် စိတ်နှလုံး၏အမှောင်ထုသည် ယေရှု၏အလှအပနှင့် ဖြောင့်မတ် ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ကျွနု်ပ်သည် စာတန်၏မုသားများကို နား ထောင်ရန် မစောင့်ဆိုင်းပါ။ ယေရှုကို ငါအမြဲတမ်းလိုအပ်နေသည် ကိုိသိသည်။ ကျွနု်ပ်မစောင့်ရဘူး။ စောင့်ဆိုင်းခြင်းသည် ချုပ်နှောင် ခြင်းတွင် ရှိနေစေခြင်းဖြစ်သည်။ စာတန်၏ကျေးကျွန်အဖြစ်ရှိနေ ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ကျွနု်ပ်အပြစ်ကိုဆေးကြောရန် ယေရှုထံသို့သွား မည်။ ထို့ကြောင့် သူ့ထံသို့သွားသည်။ ကျွနု်ပ်ကိုကယ်တင်ပြီး အ သွေးတော်အားဖြင့် အပြစ်ကိုဆေးကြော ခွင့်လွှတ်တော်မူသော သားတော်ယေရှုကိုပေးသည့် ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းပါ၏။
နောက်တစ်ခုကျန်ပါသေးတယ်။ ဤသူတို့သည် စစ်မှန်သောလူငယ်များပင်ဖြစ်ကြပါသည်။ တစ်ယောက်သောသူမှာ ဤအသင်းတော်တွင် ကြီးပြင်းလာသည်။ အခြားနှစ်ယောက်မှာ တက္တ သိုလ်တက်နေစဉ်အတွင်း ဧဝံဂေလိတရားကိုနားထောင်ရန် ကျွနု်ပ်တို့အသင်းတော်သို့ခေါ် ဆောင်လာသောသူများဖြစ်ကြသည်။ အသင်းတော်သို့ခေါ်ဆောင်လာခြင်းမတိုင်မှီတွင် ဘုရား ကျောင်းသို့ တစ်ခါတစ်လေတောင်မှရောက်ရှိလာခြင်းမရှိသည့် လူငယ်လေးပင်ဖြစ်သည်။ သူက ဤသို့ဆိုပါသည်။
ကျွနု်ပ်သည် ကမ္ဘာလေးကို အထက်တန်းကျောင်းကတည်း ကဖြစ်လာမည့်အရာနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ငါစဉ်းစားခဲ့သည်။ ကျွနု်ပ် သည် အသက်ရှင်ရုံသက်သက်ဖြင့် အသက်ရှင်သည်။ ဘွဲ့ရသော အခါ စောင့်ထိန်းသူကောင်းကိုတွေ့ရှိရပြီး မိသားစုဘဝကိုစတင် သည်။ ၄င်းမှာ အနာဂတ်နှင့်ပါတ်သက်ပြီး ကျွနု််ပ်၏ယူဆချက် ဖြစ် သည်။ ၄င်းမှာ ကျွနု်ပ်အတွက် အဓိပ္ပါယ်မဲ့ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအချိန်က ကျွနု်ပ်တွင် တိကျသည့်ဘာသာတရားယုံကြည်မှုမရှိသေး။ ကျွနု်ပ် ထင်မြင်စဉ်းစားမိသောအရာမှာ ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမွန်မှုပင် ဖြစ်ပါသည်။ မတူညီသောဘာသာတရားတိုင်းသည် စိတ်ဝင်စား စ ရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ယေရှုသည် ဘာသာတရားတစ်ခုအ ဖြစ် ထိုအချိန်တွင် ကျွနု်ပ်အား ရည်ညွှန်းထားပါသည်။ လက်ဝါး ကပ်တိုင်တွင် အသေခံခြင်းသည်လည်း ပုံပြင်သဘောသက်သက် သာနားထောင်ခဲ့ရသည်။
ဧဝံဂေလိတရားကိုကြားခဲ့ပြီးနောက် ယေရှုသည် အဘယ်သို့ သောသူဖြစ်သည်ကို အံ့သြမင်သက်မိသည်။ အပြစ်နှင့်ပြည့်နှက် သောသဘောသဘာဝတွင် သမ္မာကျမ်းစာဖတ်ရှုခြင်းနှင် ့လူတိုင်း ကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် အဘယ်သို့ပြောင်းလဲသည်ကို လေ့လာသည်။ ယေရှုကို ယုံကြည်ကိုးစားသည့် ကြိုးစားသည့်အချိန်တိုင်း ကျဆုံး သည်။ ကယ်တင်ခြင်းရသည်ဟုထင်သော်လည်း မိမိကိုယ်ကို ကယ်တင်ရန် ကြိုးစားခြင်းသာဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် နေ့တိုင်း ဝေးလျက်သာရှိသည်။ အမှီလိုက်ဖို့ကြိုးစားလေလေ ကျွနု်ပ်တို့ ကြားတွင် ဝေးကွာလေလေဖြ
၂၀၁၅ ဇွန်လ ရ ရက်တွင် ကျွနု်ပ်ကို ဒေါက်တာ Cagan နှင့် ဒေါက်တာ Hymers တို့က ကျွနု်ပ်ပျောက်ဆုံးနေသေးကြောင်း ပြောကြသည်။ အရင်တုန်းမှာလည်း ကျွနု်ပ်ပျောက်ဆုံးကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် အလွန်ပင်ခက်ခဲလွန်းလှပါ သည်။ ဘုရားသခင်သည် ထိုအရပ်တွင် ရှိတော်မူသည်။ ကျွနု်ပ် သည် အရင်က လုံးဝမခံစားခဲ့ရဖူးသော ကျွနု်ပ်စိတ်နှလုံးသားအ တွင်းတွင် လေးလံမှုများအစပြုလာခဲ့ပါသည်။ ယေရှုကို အခါခါ ငြင်းငယ်ခဲ့ခြင်းအတွက် စိတ်ပျက်မိသည်။ မျှော်လင့်ချက်လည်း ဆုံးပြီ၊ သို့သော် အံ့သြဘွယ်ရာဖြစ်ျက်လာသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မျှော်လင့်ချက်တွေ့ဆုံးရှုံးသွားခဲ့သည်။ သို့သော် ထိုအချိန်တွင် အံ့ သြဘွယ်ရာအမှုဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ ယေရှုသည် စစ်မှန်သောဘုရား သခင်ဖြစ်ပါသည်။ သူ၏အသက်စွန့်မေတ္တာကို စဉ်းစားတွေးမိလေ တိုင်း မျက်ရည်များစီးကျလာသည်။ သူပေးသည့်မေတ္တာအတွက် ဆုတောင်းပြီး ကျေးဇူးတင်နေမိပါသည်။ သူသည် လက်ဝါးကပ် တိုင်ပေါ်တွင်အသေခံပြီး ကျွနု်ပ်အပြစ်ရှိသမျှကိုဆေးကြောတော်မူ သည်။ သူ၏မေတ္တာသည် အပြစ်သားများအပေါ်မည်မျှယိုးစီးသည် မှာ အလွန်ပင် အံ့သြဘွယ်ကောင်းပါသည်တကား။ အဘယ်သူမျှ မလုပ်ဆောင်နိူင်သောအရာကို ယေရှုခရစ်က လုပ်ဆောင်တော်မူ ခဲ့ပါသည်။ သူပြန်လည်တောင်းဆိုသောအရာမှာ သူ့ကိုပြန်လည် အားကိုးရန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုခရစ်ကိုသိကျွမ်းခြင်းသည် အံ့ ဘွယ်ပါတကား။ ကျွနု်ပ်အထီးမကျန်တော့ပါ။ အကြောင်းမှာ စ ကားပြောဖော်အဖြစ် သူ့ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါသည်။ ကျွနု်ပ်သည် လှည့်လည်နေသူမဟုတ်တော့ပါ။ သူသည် ကျွနု်ပ်အား လမ်းပြ ပေးနေပါသည်။ သူသည် ကျွနု်ပ်၏မိတ်ဆွေ၊ ကျွနု်ပ်၏ဘုရားသခင် နှင့်ကယ်တင်ရှင်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
ယခုတွင် ကျွနု်ပ်၏မိတ်ဆွေ၊ သင်သည် ယေရှုကို အားကိုးယုံကြည်လျက် သင်၏အ ပြစ်အလုံးစုံကို အသွေးတော်အားဖြင့် ဆေးကြောသန့်စင်စေမည်လား။ ကယ်တင်ရှင်ကို အားကိုးယုံကြည်သောအခါ သီချင်းဆိုနိူင်လာပေမည်။
ယေရှု၊ အဘယ်မျှချစ်သည်၊ အို ယေရှု၊ အဘယ်မျှချစ်သည်ကို
အို၊ ယေရှု အဘယ်မျှချစ်သည်၊ သူငါ့ကိုချစ်သောကြောင့်တည်း။
(“အို၊ ယေရှု၊ အဘယ်မျှချစ်သည်။” Frederick Whitfield, ၁၈၂၉-၁၉၀၄ ).
ဒေါက်တာ Chan ၊ ကျေးဇူးပြုပြီး ဆုတောင်းဦးဆောင်ပေးပါ။ အာမင်…။
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ ကျမ်းစာဖတ်ကြားခြင်းကို မစ္စတာ Abel Prudhomme က ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဗျာဒိတ် ရး ၉- ၁၇
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ Mr. Benjamin Kincaid Griffith “က ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းသည်။
"ယေရှုဘယ်မျှချစ်သည်"၊ (Frederick Whitfield ၁၈၂၉-၁၉၀၄) ရေးစပ်သည်။